SERASERA, TENY MALAGASY: 18/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 18/02/11
18 Février 2011, 22:35pm
Tomorrow koa day !
« Ho avy aho ! Ary tsy nihevitra ny hoe nanao ratsy tao an-tanindrazako ka tsy hisy hahasakana ahy amin’izany fodiako any na koa hampatahotra ahy. Efa ireto ny billets-n’ny fiaramanidina hiondranako any. Mahatsiaro tena ho tompon’antoka amin’izao fahantrana lalina manjo ny firenena Malagasy sy ny mponina ao aminy izao ny tenako. Ary raha iny sori-dalan’i Dr Simao iny, dia sahiko lazaina eto fa tsy an’ny SADC iny fa azy samy irery tany. Nandritra ny roa taona izao dia tsy nahitàna vaha-olana mahomby ny lafiny politika, indrindra ny fahasahiranana manjo ny vahoaka, koa tsy maintsy hisy ny fifandraisan-tanana ho fanarenana ny firenena ».
Ir e o n o f i la z a ny antonantony s y ny fototry NY « Tsy maintsy ny iverenany eto. Tsy nisala las ala ny F iloha taloha Ravalomanana nanmpatsiahy fa izy no filohan'ny Repoblika voafidim-bahoaka teto, ary ambonin'izay, filoha voafidy ara-demokratika no nivoahan'izany maha filoha azy izany.."Aoka ihany hoy ny tenany mba tsy hanana fironana ny tafika, sy ny miaramila fa hijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena, ka hanataneraka ny adidy sy andraikitra takian'ny mpiray tanindrazana amin'izy ireo.
Tsy toraka bilao fa tena izy !
Hita vonona sy tapa_kevitra tokoa ity … (Suivre le lien)
Fiverenan'ny Filoha teo aloha: Vonona hiady ny miaramila raha vao misy mersenera
Ny EMMO/FAR mihitsy no hiara-hientana hitandro ny filaminana anio hiandry ny fiverenan'Andriamatoa Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana. Hentitra tokoa ry zareo raha ny fanazavan'ireo tomponandraikitra eo anivon'ny EMMO/FAR nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly nilaza fa raha vao misy mersenera na miaramila avy any ivelany tafiditra miaraka amin'ity Filoha teo aloha ity eto, dia efa vonona hiady ny miaramila. Tsy « maintien de l'ordre » intsony no hatao amin'izany fa efa fiarovana ny sisintany ka tsy maintsy miditra an-tsehatra ny Tafika hoy ny Kolonely Razafindrazaka Maherison, lehiben'ny RM1 etsy Analakely. Raha izany mantsy no misy hoy izy dia raisina ho toy ny fahavalom-pirenena ny Filoha teo aloha. Mety hafampana tokoa ny toe-draharaha anio raha izany no mitranga.
Raha ny vaovao hatramin'ny omaly ihany mantsy dia … (Suivre le lien)
Fodian-dRavalomanana: «Firenen-dehibe maro no manohana, miampy ny vahoaka malagasy, efa teny an-pelatanany ny tapkilam-piaramanidina”
Hatramin'ny omaly aloha dia tena toa ho raikitra fa ho avy amin'ny asabotsy tokoa Ing. Marc Ravalomanana. Mbola nohamafisiny nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tany Afrika Atsimo izay nalefa mivantana tamina «video conference » ka nahafahan'ny mpanao gazety Gasy nametraka fanontaniana tetsy amin'ny Hotel Carlton omaly koa aza izany. Mbola vao maika koa nohamarinin'ireo tapakilam-piaramanidina na «billet d'avion» teny an-tanany nandritra io valan-dresaka io izay nasehony sy nolazainy mihitsy fa efa «ireto ny billet». Ankoatra an'ireo mpanohana azy dia maro no mankasitraka ity fodian-dRavalomanana ity. Nisy ohatra, omaly, ny fihaonan'ireo mpikambana vitsivitsy ao amin'ny ankolafy Ravalomanana tamin'ny tomponandraikitra ambony ao anivon'ny Ambasady Amerikana omaly. Ny mifandraika sy mifandray amin'ilay rahampitso no resaka, hoy ny fanazavana. I Marc Ravalomanana aza raha nanontaniana ny momba an'izay dia nanamafy fa firenen-dehibe maro eto amin'ity izao tontolo izao ity no manohana ny fodiany. Mazava koa fa manohana azy ny Atsimo na dia efa nandeha aza ny resaka fa misy olana ny fipetrany any amin'ity firenena ity. «Tsy misy ifandraisany amin'izany mihitsy ny fodiako. Tsara ny fifandraisanay ary raisina amin'ny maha Filoham-pirenena ahy aho » hoy izy nandiso ilay resaka.
Milaza ho tsy manahy ny fiarovana azy Ravalomanana. Hita ho tsy mifezaka amin'izany tokoa izy. « Tsy nanao zavatra ratsy ho an'ny fireneko aho. Tsy manahy ny … (Suivre le lien)
Hetsiky ny mpitondra fivavahana: “Tsy tokony hanaovana ramatahora ny fodian-dRavalomanana”
Araka ny efa nambara teto omaly dia nanao fanambarana momba ny fodian-dRavalomanana an-tanindrazana rahampitso ny Hetsiky ny mpitondra fivavahana. Mazava ho azy fa mankasitraka an’ity resaka ity ireto Pasitera ireto. Dia mifandraika amin’izay ny fanambarana nataon-dry zareo tetsy amin’ny Au Bon Acceuil Ambatonakanga omaly. “Tokony horaisina amin’ny lafin-javatra ambony ny fiverenan’ny Filoha teo aloha eto an-tanindrazana fa tsy hanaovana ramatahora sy hanaovana izay mety hisian’ny savorovo” hoy izy ireo. Nomarihin’ireo mpitondra fivavahana ireto fa “zon’ny Malagasy ny miverina eto amin’ny taniny na natao sesitany izy na nanao sesitany ny tenany. Voalaza ao amin’ny soratra Masina ny mahakasika izany. Mankalaza ny faha- 50 taona nahazoana ny fahaleovantena isika amin’izao ka … (Suivre le lien)
FODIAN-DRAVALOMANANA: Ny fikoropahana no ahiana hampikorontana
Ho avy tokoa ve Ravalomanana rahampitso ? Samy manana ny fijeriny sy ny faniriany ny tsirairay, arakaraka ny toerana misy azy. Ny fikoropahana no ahiana hampikorontana...
Tsy mahalala, tsy mandiso na manamarina, ny hoe tsy avelan’ny ao Afrika Atsimo honina any intsony Atoa Ravalomanana no anton’ny hodiany. Tsy manamarina ny filazana fa fandraisana anjara amin’ny fandaminana ny krizy politika ny fodian-dRavalomanana koa ny Sadc, ary tsy mahalala ny fodiany. Voalazan’ny sori-dalan’ny Dr Simao fa tsy mahazo mody an-tanindrazana izy mandra-pilaminan’ny politika aorian’ny fifidianana. Inona no tena anton-diany amin’izao hoe hodiany izao ? Tsy manaiky ny Fitondrana tetezamita sy ny mpomba azy... Ao ny milaza fa fanoherana ny sori-dalana hosoniavina amin’ny herinandro izany, fa te hirotsa-kofidiana ho Filoham-pirenena izy : enim-bolana fara fahakeliny no monina eto Madagasikara vao mahazo mirotsa-kofidiana, araka ny lalàm-pifidianana. Eo koa ny manahy korontana mba tsy haharaikitra ny fanaovan-tsonia sy fampiharana ny sori-dalan’ny Sadc.
Ahoana no hahatongavan-dRavalomanana eto an-tanindrazana ? Mifamahofaho... Nampiseho ny tapakila handehanany izy tamin’ny valandresaka nampitain-davitra mivantana, teny amin’ny Carlton, Anosy, omaly. Raha handeha fiaramanidina toy ny mpandeha rehetra izy, amin’ny 2 ora mahery vao ho tonga avy any Johannesburg, Afrika Atsimo, rahampitso fa tsy … (Suivre le lien)
GOVERNEMANTA VAOVAO: « Amin’ny herinandro »
Efa voavaka izay te hiditra ao anaty governemanta sy ny te hila ady, raha ny filazan’ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina teny Fiadanana, omaly. Na tsy azo irotorotoana aza ny governemantan’ny firaisam-pirenena, araka ny filazany, heveriny fa ho amin’ny herinandro ny hijoroan’izany, izay mbola nanaovany antso avo tamin’ireo hery politika « mazoto hamaha ny olana sy hiroso amin’ny fifidianana ». Noho izany, ny sonian’ireo hery politika, fa tsy ankolafy, sisa no andrasana amin’ilay volavolana sori-dalana naroson’ ny iraky ny Sadc, ny Dr Leonardo Simao. Nanteriny fa io no governemanta farany. Hatreto anefa, … (Suivre le lien)
MINISITRY NY FITSARANA: "Hoenjehina ireo manely vaovao tsy marina, raha... "
"Ny fehezan-dalàna momba ny ady heloka tsotra dia manenjika ny olona manambara vaovao tsy marina, ary mampisavorovoro saim-bahoaka." Izay no nambaran’ny minisitry ny fitsarana, Christine Razanamahasoa, teny amin’ny Foibe fanaovana fivoriana iraisam-pirenena (Cci) Ivato, omaly, raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ny filazana ny fiverenan’ny Filoha teo aloha, Ravalomanana, rahampitso izy. Hampiharina amin’ireo nanely ny vaovao tsy marina ny lalàna, raha tsy tonga amin’io andro io Atoa Ravalomanana. "Ny fiampangana an’Atoa Ravalomanana araka ny niantsoana azy teo amin’ny fitsarana tamin’ny raharaha 7 febroary, dia ny fiampangana hoe famonoana olona an-tsitrapo, misy vono sy ratra nitarika takaitra mandra-pahafatiny, vono sy ratra tsotra... ", hoy ihany izy. Koa rehefa … (Suivre le lien)
Sendikan'ny mpiasam-panjakana: Ao anatin'ny drafitry ny vondrona telo ?
Nametraka taratasy fangatahana alàlana teny amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra, hanao hetsika etsy amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny sendikan'ny mpiasam-panjakana tarihin'i Florentin Ramamonjisoa sy ireo mpiara-dia aminy. Ny resaka karama sy ny antsoina hoe " grille indiciaire " no voalaza fa anton'izao famoriana mpiasam-panjakana ataon'ny sendika ahitana ny FMMD izao. Vao avy nakarin'ny fitondrana tetezamita 10% ny karaman'ny mpiasam-panjakana rehetra ; 25% kosa ho an'ny karama farany ambany. Mbola hitaky inona indray tokoa àry ireto sendika ireto ?Heverin'ny mpanara-baovao fa ao anatin'ny drafitry ny vondrona telo manodidina ny zavatra hiseho amin'ny sabotsy ho avy izao ity hetsika ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ity. Nanambara mantsy ireo mpitarika fa tsy maintsy hanatontosa io hetsika ankalamanjana amin'ny sabotsy ho avy izao io izy ireo. Fifandrifian-javatra fotsiny ihany àry ve izany ny fanambarana ny amin'ny hahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny fikotrehina asa fanakorontanana ary ity hetsika tarihin-dry Florentin Ramamonjisoa ity ?
Nataon'ny mpanao pôlitika fitaovana hatrany ny mpiasam-panjakana nandritra izay fitondrana nifandimby izay ary ny tena mampalahelo dia ireo mpitarika ihany no mahazo tombotsoa avy amin'ny vola be atobaky ny mpanao pôlitika mandritra ireny hetsika ireny. Efa nisy fotoana niantsoan'ny … (Suivre le lien)
Tovolahy maty tao anaty "violon": Niala bala ny minisitra
Nitondra fanazavana mikasika ilay raharaha nahafatesana tovolahy iray tao anaty "violon" tao amin'ny kaomisaria Itaosy, izay notanterina teto amin'ny gazety ny alarobia lasa teo ny tompon'andraikitra eo anivon'ny filaminana anatiny, ny minisitra Rakotomihantarizaka Remi Organès sy ny tale jeneralin'ny pôlisy, Rakotondratsima Desiré, omaly teny amin'ny birao fiasany Anosy. Nampiseho ny taratasy nandritra ny
fanadihadiana nataon'ireo pôlisin'Itaosy izay voasaringotra tanteraka tamin'ny fahafatesan'i Andrianirina Tokiniaina ny alin'ny alatsinainy tao anaty ny "violon" nitanana azy teny an-toerana tamin'ny mpanao gazety.
Voalaza ao anatin'io fitanana an-tsoratra ny fanadihadiana izay tonga teo am-pelantanan'ny minisitra sy ny tale jenaralin'ny pôlisy fa "Niaiky ny heloka hono i Tokiniana fa ao anatin'ireo bandy mpanao fanafihana" ary nahazo antso ny pôlisin'Itaosy fa misy mpangalatra tratra ambodiomby teny amin'ny Cité Akany Sambatra ary efa novonoin'ny fokonolona vao tonga teny ny pôlisy. Ny teny anivon'ity toerana voalaza fa nahasamborana ity zazalahy ity anefa dia nilaza ireo nahita maso fa … (Suivre le lien)
Tafika Malagasy Hesorina ny CEMGAM, ny jeneraly Ndriarijaona
Mihazakazaka ny fivoaran’ny raharaha eto amin’ny firenena taorian’ny nanamafisan’Atoa Marc Ravalomanana fa hiverina an-tanindrazana izy rahampitso sabotsy 19 febroary.
Hita ho tsy mahatombina ny mpitondra ao amin’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita, raha ny fahitana ny zava-niseho omaly. Nisafidy ny hizara akanjo sy kiraro ho an’ny tafika i Andry Rajoelina raha toa ka Malagasy an’aliny no miantso vonjeo satria traboina vokatry ny rivodoza Bingiza. Misy ny maty, ao ny tsy hita popoka, maro ny rava fananana tao anatin’ny in-dray mipi-maso noho io loza io, fa naleon’ny mpitondra ankehitriny manao fety sy pi-maso amin’ny miaramila, fa sao … Taorian’izay dia nahoraka ny mety hanalana amin’ny toerany ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny tafika malagasy, ny jeneraly Ndriarijaona André.
Avy amin’ny andiany faha-11 ity farany, noho izy misabaka tsy … (Suivre le lien)
Hitsena ny filoha Ravalomanana Anio dia efa hiainga ireo zanak’i Dada Toamasina
Tsy nataon’ny Tiako I Madagasikara Toamasina sy ny ankolafy Ravalomanana ary ireo ankolafy roa (Ratsiraka sy Zafy) ambanin-javatra, ny fanambaran’ny filoha Ravalomanana ny hiverenany an-tanindrazana, hamarana ny krizy ao anatin’ny fifampidinihana mivantana eo amin’ny samy Malagasy.
Efa samy nanomana ny enti-manany amin’izany fitsenana ny fahatongavan’Atoa Ravalomanana izany avokoa ireo zanak’i Dada ao Toamasina, ka raha ny fandaharam-potoana teo amin’izy ireo araka ny fivoriana ny alarobia alina sy ny alakamisy manontolo ny andro, dia anio zoma izy ireo no hiara-kiainga ao Toamasina hamonjy an’Antananarivo ary hitsena amin’ny hetsika maredona ny fiverenan’Atoa Ravalomanana an-tanindrazana ity. Nambaran’izy ireo hatrany fa «ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana eto … (Suivre le lien)
Sabotsy 19 febroary 2011 Hisy andiana miaramila hiaro an’i Dada !
Vondrona iray tsy mivaky ny Tafika ary izay hatrany ihany koa ny filamatra nipetraka hatramin’izay.
Filamatra ihany izany satria ny tantara no nitsara fa nisy hatrany ny tsy fitovian-kevitra eo anivon’ny Tafika ary nisy ihany koa ny fifampisamborana na ny fifandrahonana an-kolaka. Amin’izao fotoana izao dia fantatra fa misy andiana miaramila izay niray tendro ka nilaza fa tsy hanaiky ny korontana izay mety hitranga rahampitso sabotsy. Korontana izay efa fantatra ny hanao azy ary efa fantatra ihany koa ny nanangona an’ireo bokonozatra, izay nisy navondrona tany Mantasoa tany nomena toromarika, sy andian’olona omena zava-mahadomelina mba hitsofoka ao anatin’ny zanak’i Dada ka hanakorontana. Avy eo dia entina hisamborana ireo mpitari-tolona izany, toa izay fomba efa niverimberina teto ihany.
Fantatry ny mpitandro ny filaminana izany satria manana ny mpitsikilony ireo. Fantatr’izy ireo ihany koa ny fisian’ny fanangonana olona etsy sy eroa. Ao anefa ny mody fanina sy … (Suivre le lien)